QMS Yemvura Chirongwa Inodzora Kudiridza Kubva Pazvinhu Zvakasiyana Zvinhu - Potatoes News
QMS Mvura chirongwa chinodzora kudiridza zvichibva pane zvakasiyana zvinhu
Nekuda kupa simiti iyi kunyangwe yakanangwa kudiridza, Delphy yakaisa kuyedza kumakambani maviri umo kudiridza zvirimwa zvichibva pane data kuri pakati. Kuwedzeredzwa kwekuyedzwa kwakanangwa kudiridza nemvura inonaya yakarongerwa gore rinouya.
Pamunda weonion uye mbatatisi yemakambani maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweNetherlands (Dzosera purazi rekuyedza uye mubatanidzwa weMoggré), Delphy Akkerbouw akagadza miedzo iyo nguva yekudiridzira uye huwandu hwemadiridziro hunotariswa ne data-based software modhi . Kuti izvi zviitike, Delphy Digital yakagadzira yayo yemhando (QMS Mvura) iyo iyo yekumwisa yezvirimwa zvinorimwa inogona kudzorwa. Iyi modhi yakavakirwa pane, pakati pezvimwe zvinhu, dhata kubva kuma sensors, paramende yezvirimwa, hunhu hwevhu uye fungidziro yemamiriro ekunze.
Iyo QMS Mvura modhi inodyiswa pahwaro hweakasiyana masosi enhoroondo. Iyo modhi inoratidza zuva nezuva izvo hushoma hwekunyorova kana zvakasaririra pachivara. Izvi zvinopa zano rakanakisa kudiridza. Saka kuti, nerubatsiro rweQMS Mvura, huwandu hwakaringana hwemvura hunorayirwa panguva chaiyo. Iko kushandiswa kweQMS Mvura pamwe chete nekushandisa kwekudonhedza kudiridza kunoona nzira yemberi-yakatarisana uye yakagadzikana yekushandisa mvura mukurima kurima, anodaro Delphy.
Mukutsanangurwa, Hans Moggré, chipangamazano anokwanisa kuDelphy, anoti varimi vazhinji vanorima vanoshanda nemadiridziro edripidhi pamwe chete nehunhu hwehunyoro hwevhu muzvirimwa zvavo. “Maseru sensors evhu anoratidza kukosha kwakati pachishandiswa kudiridza. Zvisinei, kudiridza kwekupedzisira kunoenderana nezvinhu zvakasiyana. Kunze kwehunyoro hwevhu, mhando yevhu, mhando yechirimwa, mamiriro echirimwa uye mamiriro ekunze anoitawo basa. "Chirongwa cheMvura yeQMS chinopa mazano akanangana neizvi."
Inotevera kudonha, Delphy inoda kuchinjisa iyo QMS Mvura modhi nenzira yekuti inogona zvakare kushandiswa kwekudiridza uchishandisa kudiridza ma reels. “Izvo zvinoda kugadzirisa. Semuenzaniso, nekudonhedza kudiridza, zvipo zvidiki zvinobatanidzwa uye nema reels, makuru zvipo. Iyo modhi inofanirwa kutora izvi nekufunga, pakati pezvimwe zvinhu, kufunga kumberi kumberi. ”
QMS Mvura programme stuurt watergift op hwaro van dzakasiyana factoren
/ kudiridza-tekinoroji /
Tags: mamiriro okunzedzora ivhuKudonha Kudiridzakudiridza hurongwamamiriro okunzekusasa kudiridza
Drip kudiridza - kuwedzera purofiti nekutarisa nyaya
Dai 15, 2021
Skagit Valley Nharaunda Invent High-Tech Kugadziridza kwevarimi 'Irrigation Dambudziko
Yako Farm: ramangwana reAg simba - propane
Kutanga muedzo nekuenzanisa kwe9 yevhu humhu sensors
Mupata: kure kure kutarisa kwepakati pivot kudiridza
Yanonoka blight yekutarisa yekudzivirira mumwaka wese
Kumusoro kweIreland kukura mumusika wembatatari kunotambirwa
Isu tinotarisira kubaya vekutanga veBelgian Frieslanders nemuvhuro, kunyangwe kutonhora kubvumbi